सानो तालिका फूलदान फैक्टरी - चीन सानो तालिका फूलदान निर्माता, आपूर्तिकर्ता
सानो मुख ठाडो अन्न एक फूल
पद्दो पानी पिउन सक्छ
२०० मिली लिटर अरोमाथेरापी बोतलहरू
क्रिस्टल हीरा गिलास पारदर्शी मोमबत्ती
१००० मिलीलिटर लीड-फ्री सोडा बोतल
~०० ~ १००० मिलीग्राम तानी कालो हरियो वर्ग जैतून तेलको बोतल
【प्यारा डिजाईन र फंक्शनल】 तपाईंको कला शिल्प अन्तरिक्षमा एक अपूरणीय क्याक्टस क्याडीको साथ केही रंग थप्नुहोस्! पेन्सिल, क्रेयन्स, टाँसिएको नोट, कैंची, ड्राई इरेस मार्कर र अधिक धेरै भण्डारण गर्नका लागि उत्तम।
Ur कडा एक्रिलिक निर्माण non गैर विषाक्त प्राकृतिक सिरेमिक र वातावरण मैत्री पेन्टबाट बनेको, वयस्क वा बच्चाहरूको लागि उपयुक्त 3yrs +।
As आवश्यक छैन भेला】 तपाईले यसलाई कार्यालय, कक्षाकोठा, भ्यानिटी टेबल, कला केन्द्र, शयनकक्षमा राख्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईंलाई कन्टेनर घटाउन र राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सक्षम गर्दछ।
Ect उत्तम उपहार विकल्प】 कडा गिफ्ट बक्स प्याकिंगमा आउँदछ, शिक्षक, विद्यार्थी, साना केटाहरू र केटीहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो उपहार।
Desk तपाइँको डेस्क सफा राख्नुहोस्】 एक रंगीन पेन्सिल भाँडो हो जसले आवश्यक कलमहरू, पेन्सिलहरू र स्टेशनरी भण्डारण गर्दछ तपाइँको डेस्कटपलाई डेस-क्लटरर्ड र सफा राख्दै।
रेट्रो डिजाईन - यस पानीमा एउटा रेट्रो र भिन्टेज डिजाइन हुन सक्छ जुन तपाईंको बगैंचामा सजावट र पूरक बनाउन सक्छ।
PUMPKIN STYLE - विभिन्न र m्गमा कद्दू डिजाइनको साथ बोट मिस्टर।
समायोज्य NOZZLE - राम्रो atomization, समायोज्य नोक, धुंध वा सीधा लाइन स्प्रे गर्न सक्छन्।
लामो NOZZLE Design - एक लामो प्लास्टिक नोजलको साथ आउँदछ, जसले तपाईंलाई सजीलो रूपमा साना बोटहरू पानी दिन अनुमति दिन्छ।
विस्तृत आवेदन - सफाई, रोपण, सफा गर्ने वस्तुहरू, आवश्यक तेल, स्पाइंग बोटबिरुवा र फूलहरू, पातहरू मिठो पार्ने र विन्डो सफा गर्ने लगायतका तपाईंको घरका सबै आवश्यकताहरूको लागि आदर्श। र अन्य धेरै प्रयोगहरू।
Oll Dollhouse सजावट your तपाईंको मनपर्ने गुड़िया घर एक्सेसराइज गर्न को लागी एक प्यारा तरीका! यसलाई तपाईंको पुतलीको घरमा एड-अन सेटको रूपमा पाउनुहोस्, वा आफ्नै आफ्नै! तपाईंले खेल्न र दिखावा गर्न आवश्यक पर्ने सबै चीज समावेश गर्दछ।
Ect उत्तम उपहार】 सुपर टिकाऊ प्ले फिगरहरू सानो हातका लागि उत्तम छन्! फिगर प्ले र उनीहरूको गुड़िया घर स Collection्कलनको लागि उत्तम जोडको लागि उत्कृष्ट। क्रिष्टमस उपहार, ब्रिथडे गिफ्ट।
【विकास खिलौना】 यी मनमोहक प्लेसिटहरू ढोंग खेलको माध्यमबाट स्वस्थ संज्ञानात्मक विकास प्रवर्धन गर्दछ। कथानक बाहिर कार्य अभिनय र आलोचनात्मक सोच प्रक्रियाहरु को व्यायाम, जबकि राम्रो मोटर कौशल र कौशलता सानो व्यक्तिहरु रमाईलो वातावरण को हेरफेर गर्न सुधार हुनेछ।
【सुरक्षित सामग्रीहरू】 गैर-विषाक्त समाप्त र बच्चा सुरक्षित सामग्रीहरू।
【नोट】 यो वस्तु जीवन आकार होइन, केवल सजावटको लागि, व्यावहारिक प्रकार्य बिना।
कानहरू जलसेक झोला वा बोतल
सामग्री: गिलास विन्डप्रूफ, स्टेनलेस स्टील म्यानुअल हेम्प रस्सीको साथ, अमेरिकी देश शैली।
यो मैनबत्ती होल्डरले मैनबत्ती दिन्छ, यो सुझाव दिईन्छ कि मैनबत्ती जलाउँदा, हात नहलाई।
तपाईले आफ्नो ठाँउ फूलदानको रूपमा सजाउन, बिरूवा राख्न, वा बोट सिमुलेट गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ वास्तविक मोमबत्ती खतरनाक हो भन्ने सोच्नुहुन्छ भने, तपाइँ एक इलेक्ट्रोनिक मैनबत्ती राख्न सक्नुहुन्छ।
फेसन नास्टल्जियाको लागि, आधुनिक व्यक्तिहरू बढ्दो घरको श्रृंगार गर्न, वातावरण उच्च पार्न मोमबत्ती, मैनबत्तीहरू प्रयोग गर्दैछन्।
सीसा नि: शुल्क गिलास को बनेको
पेशेवरहरूले बनाएको सुरुचिपूर्ण आधुनिक डिजाइन
सजिलो प्रयोग र भण्डारणको लागि डिजाइन गरिएको, सबै अवसरहरूको लागि उपयुक्त